ဘာမှ ဆက်မလုပ်နဲ့ . . တရားနဲ့သာဖြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » ဘာမှ ဆက်မလုပ်နဲ့ . . တရားနဲ့သာဖြေ	13
ဘာမှ ဆက်မလုပ်နဲ့ . . တရားနဲ့သာဖြေ
Posted by Thint Aye Yeik on Mar 11, 2015 in Critic, History, Members, My Dear Diary | 13 comments
ကိုယ့် ဥာဏ်လေးတစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ ထိုင်စဉ်းစားနေတာ။
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အဲ့ဒါလေးက အတော် တာသွားတယ် တွေးမိ။
ကျောင်းသားတွေရှေ့က ပိတ်ထားရတဲ့ ရဲဘော်တစ်ယောက်ချင်းစီကနေ ဟိုးးး ထိပ်က ထိုင်ခံအကျအနထိုင်ထားတဲ့
လူကြီးဆိုတာတွေထိ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူရဲ တာဝန်ခံရဲရင်. . .
ကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်း အဲ့လိုပေါ့. .. . .
တာဝန်ခံရင်ပေါ့. . .
ကျောင်းသားတွေ ရန်ကုန်ကို ချီတက်မယ်။
ရန်ကုန်ရောက်ပြီးရင် လူစုခွဲမယ်ပြောထားတယ်။ ကျောင်းသားအလံထူ သီချင်းဆိုပြီး ဝင်မယ်ပြောတယ်။ ဒါတွေတောင်းဆိုပြီး ရန်ကုန်ဝင်ခွင့်တောင်းတာကို အဲ့နေရာ တာဝန်ကျတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တယောက်ယောက်က ”အေး မင်းတို့ ဒီလိုသွားမယ်ါလုပ်မယ် ပြီးရင် လူစုခွဲမယ်ဆို သွား။ ” လို့များ ခွင့်ပြုနိုင်ရင် ဒီအခြေအနေထိ ပုံပျက်ပန်းပျက် ရောက်မယ်မထင်ဘူးလို့။
အထက်က မေးရင် ”ဟုတ်တယ် ကျုပ် သွားခွင့်ပေးတာ။ သူတို့ကို ကတိအပြန်အလှန်ယူပြီး ခွင့်ပြုတာ ကျုပ်ပဲ” လို့ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရဲကြရင် ပေါ့။
The Lady ဇာတ်ကားထဲက ဒေါ်စုကို ပစ်သတ်ဖို့ သေနတ်နဲ့ ချိန်အခန်းမှာ သေနတ်နဲ့ချိန်တဲ့စစ်သား. . . ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လုပ်ရပါ့မလားဆိုပြီး အထက်က ပြစ်ဒဏ်ခတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုး ဘယ် ရဲကမှ အဖြစ်မခံရဲဘူးထင်ရဲ့။
ဖမ်းမိလာတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဆွဲခေါ်ရုံအဆင့်မဟုတ်ဘူး။ ချုပ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားကို ရဲတွေက တယောက်ပြီးတယောက် ပြေးရိုက်နေသေးတာာာာ။
ကျနော် ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ မပါခဲ့ပေမယ့် အဲ့လောက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးဖို့တော့မလိုဘူးထင်မိတယ်။
ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုလည်း အဲ့လောက် ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး အညှိုးတကြီး ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသင့်တာလားလို့ တွေးမိတယ်။
တချို့ FB မှာ ပြောထားတဲ့ ကော်မန့်တွေထဲ ”တုတ်နဲ့တန်တဲ့သူ တုတ်ရတာ”လို့ပြောထားတော့ ကျနော် အံ့သြတယ်။
အခု ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က ဆန္ဒပြခွင့် တောင်းဆိုခွင့် ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုသွားနေတယ်ဆို ။
ဘာလက်နက်မှမကိုင်ပဲ ဆန္ဒပြတာ တောင်းဆိုတာကို အဲ့လို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးစရာ လိုသလားပေါ့
88 တုန်းကလို ဖြေရှင်းချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို ပြည်သူတွေစားသုံးနေရပါပြီဆိုတဲ့ အပြောတွေ ဘာလို့ပြောနေသေးလဲ။
နောက်ပြီး ဦးရဲထွဋ်ကို မေးတဲ့ သတင်းထောက်ကို သူပြန်ပြောတဲ့အထဲမှာ
မရိုက်ချင်ရိုက်ချင် ရိုက်နေတာပါဆိုတဲ့ပုံလည်း တစ်ကွက်မှမပေါက်ကြပါဘူး။ ချနေတာ အသေအလဲ။
နောက်ထပ်ပြောသေးတယ်။ ဥပဒေအရ ဖြေရှင်းတာတဲ့။
ဒီလိုဖြေရှင်းပုံမျိုးနဲ့ဥပဒေဆိုတာကြီးက တခြား ဒီမိုနိုင်ငံတွေရဲ့ ဥပဒေလိုမျိုး ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ ကျေနပ်ကြည်ဖြူလိုက်ရတော့မှာလား။
ဒီလို ဖြေရှင်းတာ ဥပဒေအရဆိုရင် ဒီဥပဒေဟာ ပြည်သူကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေလား။
ဒီလုပ်ရပ် ဒီဥပဒေဟာ ပြည်သူအတွက် ဘယ်လောက် လုံခြုံစိတ်ချရသလဲ။
ဦးရဲထွဋ်ကို Sky net ကထင်တယ် မေးနေတာ။ ဖုန်းအသံနဲ့။
ဆိုတော့ အစိုးရပိုင်ရုပ်သံလိုင်းရဲ့သတင်းထောက်က အစိုးရ အရာရှိတယောက်ကို သပိတ်ကိစ္စ မေးပြီး အစိုးရပိုင်ရုပ်သံက လွှင့်တယ်ဆိုကတည်းက တွေးမိတယ်။
ဒါ ကာဖို့အတွက် ပြောခွင့် ပေးတဲ့လမ်းစလားလို့။
ပြနေတဲ့ပုံတွေကြည့်တော့လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ရိုက်နေတာ တပုံမှမပါဘူး။
ကျောင်းသားတွေက သံဆူးကြိုးကို အတင်းဖယ်နေတာပဲ ထပ်ခါထပ်ခါပြတယ်။
ရဲတွေ ရိုက်နှက်တာ မပြဘူး။ ဆိုတော့ . . .
အင်တာနက်ဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ ရွာတွေမှာ. . .သတင်းထိုင်ကြည့်သူတွေက ဘယ်လိုထင်မလဲ။
သတင်းစာမရောက် လှည်းမပေါက်တဲ့နေရာဒေသက ပြည်သူတွေ က ရဲတွေရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်အညှိုးတကြီးရိုက်နှက်တဲ့ပုံရိပ်ကို ဘယ်လိုတွေ့မလဲ။
ကျောင်းသားတွေ ကိုယ့်ဘာသာ အေးအေးဆေးဆေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။
အရိုက်ခံရမှ မှတ်မှာ ဆိုပဲ။
သက်ရောက်မှုတွေတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်လို့
ထပ်တွေးပြီး ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ မွန်းကျပ်နေတာကို ဖြေလျှော့လိုက်ရပါကြောင်းးး
kai says: ယူအက်စ်မှာ.. ရဲတွေဖြစ်ပုံပြောပြမယ်…
ကားတစင်းစင်းက… သတ်မှတ်မိုင်ထက်.. ပိုမောင်းတယ်ဆိုပါတော့..အဲဒါဆို.. ရဲကလိုက်ပါတယ်..။
အဲဒါ.. ကားမောင်းသမားက.. ပြေးရင်းပြေးရင်း.. သတ်မှတ်ပြည်နယ်နယ်နမိတ်ကျော်ရင်.. အများအားဖြင့်.. နောက်ကလိုက်တဲ့ရဲတွေ.. လှည့်ပြန်သွားသဗျ..။
သူတို့စိတ်ကူးပေါက်ရင်တော့.. ဟိုမှာဖက်ပြည်နယ်က.. ရဲကို.. အကြောင်းကြားထားတယ်ပေါ့လေ..။
သာမန်အားဖြင့်.. ဒဏ်ကြေးချတဲ့အခါမယ်.. အမှုဖြစ်တဲ့နေရာကပြည်နယ်ဒဏ်ကြေးချ.. အဲဒီပြည်နယ်.. (တခါတလေများမြို့နယ်.) ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ကြေးချ/ဒဏ်ကြေးဆောင်ရတာကိုး..။
တခြားပြည်နယ်ကရဲက.. သူနဲ့မဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်က.. ဒဏ်ငွေကို.. သွားဆောင်ခိုင်းပြီးရင်..ငွေကိစ္စ.. ဥပဒေကိစ္စ.. ဘာညာတွေမှာ.. အလုပ်ရှုပ်တာကိုး…။
အဲဒီဒဏ်ကြေးငွေက.. အဲဒီရဲတွေအတွက်..လစာငွေ.. အဲဒီပြည်နယ်လမ်းတွေအတွက် ပြင်စင်စရိပ်ပြန်ဖြစ်ရတာကိုး..။
အဲလိုပြည်နယ်တွေကူးသွားရင်.. ဆိုင်သွားရတာကတော့.. ဖယ်ဒရယ်(ပြည်ထောင်စု)ဌာနဖြစ်တဲ့.. အက်ဖ်ဘီအိုင်ပေါ့..။ နောက်.. လေယဉ်တွေမှာလိုက်ရ..စောင့်ရှောက်ရတဲ့.. ပြည်နယ်အလုံးဆိုင်ရဲ(မာရှယ်)တွေပေါ့…။
မြန်မာပြည်ရဲ့အခုကျောင်းသားသပိတ်လို.. ပြည်နယ်ဖြတ်.. လျှောက်တဲ့သပိတ်ဆို.. ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာဖြစ်ရင်.. ရဲတွေတော်တော်တာဝန်ယူ/တာဝန်ခံရခက်မယ်ထင်..။ ပိုဆိုးတာက.. ဖယ်ဒရယ်အစိုးရဖြစ်တဲ့.. အိမ်ဖြုတော်နဲ့.. ၀န်ကြီးဌာနတွေ..။
ဆိုင်ရာပြည်နယ်ရဲတွေအပေါ်.. ဘာမှ.. တိုက်ရိုက်ပြောခွင့်.. ညွှန်ကြားခွင့်မရှိ..။
မတော်.. ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေဖေါက်တယ်ထင်ရင်တော့.. အစိုးရကနေ.. ရဲတပ်ဖွဲ့ကို..တရားစွဲပေါ့..။
တလောက.. ဖာဂူဆန်မှာ လူမည်းကောင်လေးကို.. လူဖြူရဲက.. ပစ်သတ်တာမှာ.. အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်.. လူမည်တွေလူဖြူတွေ ရဲကားတွေမီးရှို့..အိမ်တွေမီးရှိုလုပ်တာမှာ.. သမ္မတအိုဘားမားခင်ဗျာ.. ဘာမှမပြောနိုင်..ပြောခွင့်မရှိခဲ့..။
ဒါပေမယ့်.. ဆိုင်ရာရဲက..အဲဒီနယ်သားမို့.. အဲဒီနယ်သားရဲအပြစ်ရှိမရှိကို.. အဲဒီနယ်ကတရားရုံးကပဲ.. စီရင်ချက်ချပါတယ်…။
အဲဒီမှာ အပြစ်မရှိဆုံးဖြတ်သမို့.. အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီအကြောင်းပြချက်မှာ.. အဖြူက…အမဲကိုပစ်သတ်တာမှာ.. အသားအရောင်ခွဲခြားမှုရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်လာတဲ့အချိန်ကျ.. ဖယ်ဒရယ်က.. စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဝင်လို့ရသွားပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ဟာ.. ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်.. ဒီလိုသဘောတွေသိသင့်..။
ခင်ဇော် says: ကျောင်းသားဂျီးတွေက သံဆူးကြိုးတွေကို သူတို့ အားဂျီး နဲ့ တွန်းလို့ …..
ရဲလေးတွေက နံပတ်တုတ်နဲ့ ကျောင်းသား ၁ ယောက် ရဲ ၁၀ ယောက် ဝိုင်းရိုက်ရုံကို
ရိုက်ရလွန်းလို့ ညဘက် ခန္ဓာကိုယ်တွေ နာနေတာတောင် မသနားပဲ အသရေဖျက်ကြတာနော်။
Alinsett@Maung Thura says: ​အေးေ​နော်​
​​သေနတ်​​လေး​တွေနဲ့ မပစ်​တာ ဒင်းတို့ ကံ​ကောင်းလို့
kai says: ဆိုတော့…
အခု.. ကျောင်းသား… သပိတ်..
အကုန်ဖြစ်သွားတာတောင်.. တတိုင်းပြည်လုံးအုံကြွလာတာမျိုးနဲ့.. စစ်တပ်ကွဲထွက်သွားတာ.. မဖြစ်တဲ့အတွက်…
ဆေးစစ်ချက်တွေအောင်တယ်/ကျတယ်.. လို့.. အသိအမှတ်ပြုကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်..။
စစ်တပ်အနေနဲ့.. အောင်မြင်စွာခြေတလှမ်းထပ်ဆုတ်ပေးသင့်ပြီလို့လည်း.. မျှော်လင့်မိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဆုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဂိမ်းတွေ ထဲ ကလို ရန်သူတွေ ကို စားလိုက်တိုင်း ပါဝါ တိုးတိုး လာနေတာဘဲ မြင်တယ်။
မထိတထိ လုပ်မရတာကို သိသွားလို့ အနုနည်း နဲ့ ချော့ပေါင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုလဲ နားမလည်ကြ။
ဒီလောက် ဒုံးဝေးလွန်းလို့ လဲ ဒီလို ခံ နေရတာ။
ကိုယ့်ဘက်မှာလဲ အားမရှိဘဲ နဲ့ သွားသွားစနေမယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်း ပိုဆိုး လာဖို့ဘဲ ရှိတယ်။
ငုံ့ခံ တာလား၊ ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ် နေတာလား အသိသာကြီး။
ဒီ ကလေး တွေထဲ ပညာတတ်ချင်လွန်းလို့ ထက် ဆင်းရဲလွန်းလို့ ငတ်လွန်းလို့ လမ်းမပေါ်ထွက် ပြီး ဒီလို လုပ်နေကြသူများတယ်။
ချမ်းသာရင် စာမေးပွဲ ပြီးတာ နဲ့ အလည်ထွက်ဖို့ ဘယ်သူမှ မအားဘူး။
ဒီလို ချို့တဲ့ တဲ့ ကလေးတွေကိုမှ ရှေ့တန်းတင်ပြီး နောက်က နေ အစိုးရ ကို ဆွ နေသူ တွေ က ပိုပြီး စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။
kai says: ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေပွဲ ရက်ပိုင်း အတွင်းစတင်မယ်လို့ သူရဦးရွှေ မန်းပြော
11 March 2015 22:43(+0630) (လွန်ခဲ့သော ၁ နာရီ ခန့်က)
ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တွေ့ရစဉ်။ photo from youtube
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံ ပြီး ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာရေး အတွက် ဆွေးနွေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းပေါ်ပေါက် လာတော့မှာဖြစ်ကြောင်း၊ တွေ့ဆုံမယ့် နေ့ရက်အတိအကျ မသိရသေးပေမဲ့ ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ မှာပါဝင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ခရီးမသွားကြဖို့ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွေှ့မန်းက အသိပေး ထားကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင် က ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ နဲ့လေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဘက် ကတွေ့ဖို့ဟာလေ၊ အဲ့ဒါလေးကအကောင်အထည်ပေါ် လာနိုင်တယ်၊ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ခရီးစဉ်တွေကိုရပ်ထားပေးပါလို့ လွှတ်တော်နာယကကြီးက စကားဦးသန်းလာ တာ ပေါ့လေ၊ ၆ ပွင့်ဆိုင်လေး ကမကြာခင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာ သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တယ်၊ လွှတ်တော်နာယကကြီးနဲ့ သမ္မတကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလလေးတစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တယ် လို့ ပြောပါတယ်၊ ဒီလိုပဲ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကကြီးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလဲတွေ့ခဲ့တယ် လို့ပြောပါတယ်”
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ နှစ်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကိုယ်စားပြုမယ့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ ပါဝင်တဲ့ ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြီးခဲ့ တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလက ပြည်ထောင်စုအစိုးရကို တိုက်တွန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Alinsett@Maung Thura says: အမေနဲ့ ဘာနဲ့ ညာနဲ့ တွေ့တာ အသာထားဦး
”အခုတော့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းသည်သာ နည်းလမ်းမှန်ဖြစ်ကြောင်း”
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ပြောနေပါလားဗျ. . .အစက ဘာလို့ မပြောလဲ
Ma Ma says: ၈၈ ကို မီခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရ၊ စာတွေ ဖတ်ရရုံနဲ့တင် ကျောချမ်းတယ်။ ကိုယ့်အသားလည်း အနာမခံချင်ဘူး။
တခြားသူတွေကိုလည်း မနာစေချင်ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: ကျ​နော်​ လည်း သူများအသား နာတာကို ကိုယ့်​အသား နာသလို ခံစားမိတတ်​သူ
naywoon ni says: တစ်​ရာ နဲ့​ဖြေလို့ တစ်​ဆယ်​ဖိုး​လောက်​​ကျေရင်​​တော်​​သေးတာ​ပေါ့ကွယ်​ ။ အလက်​ဆင်းဒါး ​ရေ တိုက်​ပွဲက မပြီး​သေးဘူး​နော်​ ။ ​ငွေ​ရောင်​ပိတ်​ကား​ပေါ်မှာ ဆက်​လက်​ရှုစားဖို့ ကျန်​​သေးရဲ့ အား​မွေးထားဦး
Alinsett@Maung Thura says: အဘနီရေ
ဖုန်းထဲ ပို့ပို့ ပေးနေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုကတော့ဖြင့်
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ ရရာလက်နက်ဆွဲပြီး ဒီအစိုးရကို ဖြုတ်ချကြ
Kaung Kin Pyar says: ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ပြေပြေလည်လည် ပြီးသွားစေချင်တာပဲ…
ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုတဲ့အချက်အကုန်လုံးကို (အစပိုင်းကနေ ပြန်ပြင်တာတွေ နောက်တိုးအချက်တွေ….အဲ့ဒီအကုန်လုံးကို) အစိုးရဘက်က လိုက်လျောလိုက်လို့ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သေချာသလား…..
Alinsett@Maung Thura says: အကုန်လုံး မဟုတ်တောင် တချို့ တချို့. . .
စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့အထိ လိုက်လျောပေးသင့် ထင်တာပဲ
ချက်ကျလက်ကျ တွက်ချက်ပြသင့် ထင်တာပဲ
ပညာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်က နိုင်ငံတကာနဲံ့ နှိုင်းဆကြည့်ရင်
အနိမ့်တကာအနိမ့်ဆုံး တွင်းဆုံးနေတဲ့အချက်ကြီးကို မြှင့်တင်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အချက်ကြီး